အစ်မသာ မဖြုန်းတီး မိရင် ဒီ့ထက်ပို အဆင်ပြေနေမယ်လို့ Branded တွေဝယ်သုံးမိတဲ့ အပေါ် သံဝေဂရမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ “ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း” – EverBestMM
အဆိုရှင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတေးသံရှင်နဲ့ အောင်လနဲ့ အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ရပ်နားထားပြီး တေးဂီတ ဖန်တီးမှုတွေကိုသာ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာတော့ ဝိုင်းစုက “အစ်မသာမဖြုန်းခဲ့ရင် ဒီ့ထက်ပိုအဆင်ပြေနေမှာ လို့ သူမကBranded ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အတွက်သံဝေဂရနေတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝိုင်းစုက “ကိုယ်ဖြုန်းခဲ့တဲ့ အရာတွေလည်းရှိတယ်… ငယ်ငယ်တုန်းက လိုချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ Brand တွေလျှောက်ဝယ်…နောက်ဆုံး ကျရင် အဲ့ဒါတွေက ဘာမှမဟုတ်ဘူး… လက်ဝတ်လက်စားလို နောက်ပိုင်းပြန်ရောင်းလို့လည်း မရဘူး….. Branded ကလည်း Update အမြဲထွက်နေတာ ဆိုတော့ ဒိတ်အောက်သွားရင် ကိုယ်လည်း မကိုင်ချင်တော့ဘူးလေ…. ပျက်စီးသွား မှာလည်း ဆိုးတော့ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းရတာလည်း အလုပ် တစ်ခုဖြစ်နေတယ်….”လို့ ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
သူမအနေနဲ့ ဒီလိုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို ပိုလှူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူမဖြုန်းတီး မိတာတွေကို သံဝေဂရမိတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”ငါတချိန်လုံး ဝယ်တယ် တချိန်လုံးသုံးတယ် ပြီးတော့ ဘာမှလည်း မကျန်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒါတွေကို ရပ်လိုက်တယ်….အမဒါတောင် အွန်လိုင်းက မှာလို့ရတာတွေကို လျှောက်ဝယ်နေ မိသေးတယ်… ဒါပေမယ့်လည်း အခုတော့ အတော်ထိန်းနိုင်နေပါပြီ” လို့ ရှင်းပြလာခဲ့တာပါ။ ဒါကတော့ ပရိသတ်ချစ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုယ့်ဘဝ မှာ ဝိုင်းစုနဲ့ တိုက်ဆိုင်တာမျိုူးရှိရင် မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
အဆိုရှင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတေးသံရှင်နဲ့ အောင်လနဲ့ အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ရပ်နားထားပြီး တေးဂီတ ဖန်တီးမှုတွေကိုသာ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာတော့ ဝိုင်းစုက “အစ်မသာမဖြုန်းခဲ့ရင် ဒီ့ထက်ပိုအဆင်ပြေနေမှာ လို့ သူမကBranded ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အတွက်သံဝေဂရနေတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ သဘာဝ မင္းသားႀကီးေက်ာ္ဟိန္းတစ္ေယာက္ ယေန႔မနက္ပဲ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါျပီ…
အလႉလုပ္ ခ်င္လို႔ ရွိတဲ့ေ႐ႊေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီး သိန္း (၄၀) နီးပါး လႉတန္းခဲ့တဲ့ မယ္လိုဒီ